ज्योति विकास बैंक : कम्पनी विश्लेषण (सोमवार, २५ चैत २०७५)
चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा यस विकास बैंकले रू. १७ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ६१ प्रतिशत बढी हो । कम्पनीले गत आवमा रू. १४ करोड २५ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी गत आवको तुलनामा ३६ प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा २१ प्रतिशत बढेपछि नाफा बढेको हो । कम्पनीले हाल ३५ ओटा शाखा कार्यालयबाट बैंकिङ सेवा सुविधा दिँदै आएको छ ।
कम्पनीको ११औं सभाले ८ दशमलव ४ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको छ । सभामा संस्थापक समूहको शेयर स्वामित्व ६० दशमलव ४५ प्रतिशत रहेकाले संस्थापकतर्फको शेयर स्वामित्व ५१ प्रतिशत कायम गर्न यसतर्फको बाँकी शेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न स्वीकृति दिएको छ । यस कम्पनीले हाम्रो विकास बैंकलाई एक्वायर गरी चैत १५ गते एकीकृत कारोबार शुरू गरेको छ ।
2019-04-08 - 129 view(s) - abhiyan